FAMPIDIRANA JIRO SY RANO : Nifanakalo hevitra ny tompon’andraikitra sy ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa
Nanahirana ny vahoaka teto Mahajanga ny nandre ny fampahafantarana avy tany amin’ny minisiteran’ny fanajariana ny tany fa tsy mahazo mampiditra jiro sy rano raha tsy manana fahazoan-dalana hanorina. 16 mai 2019
Niteraka resabe izy io ka nisy ny fivoriana tao amin’ny biraon’ny prefen’i Mahajanga, ny alarobia teo. Nanatrika izany ny tompon’andraikitry ny Jirama, ny kaominina, ny filan-kevitry ny kaominina, ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa ary ny prefe. Nentina tao daholo ny tranga rehetra mety hitranga tsy ahazoana io fahazoan-dalana hanorina io sy ny mety mbola tsy hilana azy nefa ilana jiro sy rano. Taorian’ny fifandaharana dia tapaka fa ny kaominina no hamaritra ireo olona homena ny fahazoan-dalana manokana. Nambaran’io naoty io tokoa mantsy fa tsy azo ampidirana jiro sy rano raha tsy manana fahazoan-dalana hanorina na mahazo fahazoan-dalana manokana. Io izany sisa andrandrain’ireo izay tsy manana fahazoan-dalana manorina, toy ireo trano vita amin’ny akora eto an-toerana, na trano vita amin’ny fanitso.
Ny fanorenana rehetra dia ilana fahazoan-dalana daholo raha ny tokony ho izy fa raha akora mora simba ireo no anaovana azy dia ny kaominina ihany dia afaka manapaka sy manome ny alalana. Nambara koa ny alarobia teo fa manomboka izao dia tsy maintsy ampandalovina any amin’ny kaominina koa ny fangatahana hampiditra jiro fa tsy any amin’ny fokontany fotsiny toy ny taloha. Marihina anefa fa mbola tsy mandray fangatahana fampidirana jiro sy rano ny Jirama fa mbola mametaka ny an’ireo efa nangataka taloha.
FAMPIDIRANA JIRO SY RANO
2019-05-20 11:20:39 par RAZAFIARIMANANA HERISOA
dia ahoana ny demande teo aloha nefa efa nahazo attestation mamaky lalana tany amin’ny commune